राजनीतिक स्थायित्वको चाहना | Mechikali Daily
राजनीतिक स्थायित्वको चाहना
Posted By: Mechi Kalion: ३ बैशाख २०७४, आईतवार ०५:५६
दशकौं देखिको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ नयाँ संविधान जारी भएसंँगै पूरा भएको हो । अब समृद्धिको लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समृद्धिका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा अझै पनि अलमलमा पर्नु भनेको मुलुकका लागि विडम्बनाको कुरा हो । समृद्धिका लागि अभियान सुरु भयो भनेर नेताहरुले बारम्बार उद्घोष गरेपनि त्यस अनुरुपको काम भएको छैन । नेपालको विद्यमान राजनीतिक प्रवृत्ति र अवस्था हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि अझै पनि अस्थिरताको अन्त्य भएको छैन । अब यस्तो अस्थिरताको अन्त्य हुन सकोस् । समृद्धिको अभियान व्यवहारमै लागू हुन सकोस् ।
समृद्धिका कुरा कुरामा मात्रै सीमित भइरहेका छन् । अब नयाँ साल लागेको छ । यो साल नेपालका लागि एउटा असाधारण साल बन्नुपर्ने छ । खासगरी संविधानको कार्यान्वयनको वर्ष हुनुपर्ने छ यो साल । संविधानलाई संस्थागत गर्न र मुलुकलाई अस्थिरताबाट माथि उठाउनका लागि यहीँं सालमा तीन तहका चुनाव हुनुपर्ने छ, चुनावले जनप्रतिनिधि चुन्ने मात्रै होइन समृद्धिका लागि सबै तहबाट एकै साथ अभियान पनि अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने छ । यसैले कुनै पनि वहाना र नाममा चुनाव टार्ने र भाँड्ने काम कसैले पनि गर्नु हुन्न । स्थायित्वको चाहना राखेका आम नेपालीहरुलाई अनेक वहानामा गुमराहमा राख्ने काम हुन सक्छ । यस्ता तत्वहरुबाट पनि बेलैमा सर्तक रहौंँ । कतिपय नेताहरु प्रतिपक्ष दलका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताइरहेका छन र उनीहरु आफ्ना सबै कमजोरीहरु पनि तिनै प्रतिपक्षी दललाई थोपरेर दिउसै साँझ पार्न खोजेको जस्तो गरिरहेका छन् ।
अहिलेको यो चेतनशील समाजमा कुनै पनि ठूलो भनाउँदो नेताले जे बोल्यो त्यहीँ सही हुन्छ भन्ने छैन । जनसाधारणले के सही ? के गलत ? कसका कारणले अस्थिरता निम्तिएको हो ? भन्ने कुराको सही हेक्का राख्न सक्ने भएका छन् । अझै पनि अस्थिरता, अलमल र निराशाका बादलहरु मडारिइरहनु भनेको स्थायित्व नहुनु हो । यसले मुलुकको समृद्धिको अभियान अझै कैयौंँ समयसम्म पछाडि पर्ने खतरा पनि बढाएको छ । सबै आम नेपालीहरु एक भएर यस्तो खतरालाई टार्न जरुरी छ । त्यो भनेकै चुनावमा योग्य र देशप्रेमी नेतालाई जिताएर हो । चुनावमा सही तरिकाले सही मान्छे छान्न सकेनौंँ भने हामीले मात्रै होइन हाम्रा कैयौं पुस्ताले पछुताउनु पर्ने हुन्छ । स्वाभिमानी नेपालीले यस्तो विषयमा हेक्का नराख्ने हो भने भोलिका दिनमा खतरा झन जेलिएर आउने छ । अब यो चुनावमा सोही अनुरुप आफ्नो भोटलाई देशप्रेमी नेता, दलका पक्षमा जाहेर गरौंँ ।
कैयौंँ पटक अवसर पाएका, कैयौंँ पटक सत्तामा पुगेकाहरु र त्यहाँ पुगेका बेलामा के कस्ता कामहरु गरेका छन्, भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर मत जाहेर गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जसले छोंटो र संकटको अवस्थामा पनि राम्रो काम गरेको छ, कायापलट पार्ने भिजन सार्वजनिक गरेको छ, जसले मुलुकको स्वाभिमानलाई उँचो बनाउने काम गरेको छ सोही नेता र दलका उम्मेदवारलाई चुन्नुपर्ने बेला आएको छ । यसैले यो चुनावमा पनि आफ्नो मतलाई खेर फाल्नु भनेको अस्थिरतालाई अलमललाई र विखण्डनकारीलाई बल पु¥याउनु हो । ख्याल गरौंँ मतको सही सदुपयोग गरौंँ ।
यो बेलामा सबैले राजनीतिक इमान्दारिता प्रदर्शन गर्न अपरिहार्य छ । हामी प्रमुख दलहरुलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छाँैं कि गतिरोध अरु धेरै नलम्ब्याऊ, चुनावको वातावरण बनेका बेलामा चुनावका विरुद्धमा कुनै पनि गतिविधि नगर, त्यस्तो गर्नेलाई पनि संरक्षण नगर । कानूनी राज्यको, विधिको शासनको सही अनुभूति दिलाउने काम गर ।